Sigstore, serivisy maimaimpoana hanamarinana ny fihaviana sy ny fahamarinan'ny rindrambaiko | Avy amin'ny Linux
Ho fiezahana hiantohana ny rojom-panomezana rindrambaiko maimaimpoana, ny Linux Foundation (ilay fikambanana tsy mitady tombom-barotra izay mitarika fanavaozana amin'ny alàlan'ny loharano misokatra) dia niara-niasa tamin'ny Red Hat, Google, ary Purdue University hanomboka tetikasa vaovao hanampiana ireo mpamorona handray mora foana ny sonia cryptographic amin'ny rindrambaiko.
Este tetikasa vaovao dia tohanan'ny teknolojia mangarahara, satria ny tahan'ny fananganana lozisialy lozisialy misokatra hatrany, ny tetikasa, Sigstore, dia mikendry ny hisorohana ny fanafihana ny toeram-pivarotana lozisialy ho an'ny daholobe tsy hiditra kaody kolikoly ao amin'ny rojom-panomezana.
Sigstore hamela ny mpamorona rindrambaiko hanao sonia am-pilaminana artifact rindrambaiko toy ny rakitra kinova, sary fitoeran-javatra, ary mimari-droa. Voalaza fa ny entana vita sonia dia voatahiry ao anaty diary ampiasain'ny daholobe.
SigStore dia mitady ny hahafahan'ny mpamorona mahatakatra sy manamarina ny niandohana sy ny maha-marina ny lozisialy izay mifototra amin'ny fomba fanao sy endrika data tsy mitovy matetika. Ny vahaolana misy dia matetika mifototra amin'ny "famintinana" (hash na vokatry ny asa hash) apetraka amin'ny rafitra tsy azo antoka, izay mety ho simba ary hitarika fanafihana isan-karazany, toy ny hash exchange na hash function, fanafihana atrehana an'ireo mpampiasa.
Ny fampiasana ny serivisy ho afaka amin'ny mpamorona rindrambaiko sy mpivarotra rehetra, ary ny vondrom-piarahamonina SigStore dia hamolavola kaody sy fitaovana miasa ho an'ny sigstore. Red Hat, Google ary ny oniversite Purdue dia iray amin'ireo mpikambana mpanorina ny tetikasa.
"Sigstore dia manome alalana ny vondrom-piarahamonina misokatra rehetra hanasonia ny rindrambaiko ary manambatra ny fahamendrehana, ny fahamendrehana ary ny fahitana hamoronana rakitry ny famatsian-rindrambaiko mangarahara sy voamarina," hoy i Luke Hinds, lehiben'ny fiarovana, biraon'ny Red Hat CTO. "Amin'ny fampiantranoana an'ity fiaraha-miasa ity ao amin'ny Linux Foundation, afaka manafaingana ny asanay amin'ny sigstore izahay ary manohana ny fananganana sy ny fiantraikan'ny lozisialy misokatra sy ny fampandrosoana."
"Ny fiarovana ny fampiharana rindrambaiko dia tokony hanombohana amin'ny fahazoana antoka fa mihazakazaka ilay rindrambaiko heverintsika fa manana isika. sigstore dia maneho fotoana lehibe ahazoana fitokisana sy mangarahara bebe kokoa amin'ny sehatry ny famatsiana rindrambaiko loharano misokatra, "hoy i Josh Aas,
Ny fiadian-kevitra fa ny rojom-pamokarana rindrambaiko maoderina dia iharan'ny risika maro, milaza ny tetikasa fa fitaovana efa misy, izay mahatafiditra olona mihaona mivantana hanao sonia lakile, ary efa niasa ela be, tsy ho tratra intsony amin'ny tontolo iainana ankehitriny miaraka amin'ireo faritra miparitaka ara-jeografika.
Ary voalaza koa fa vitsy dia vitsy ny tetikasa loharano misokatra izay manao sonia ny rakitry ny kinova rindrambaiko. Izany dia vokatry ny ankamaroan'ny fanamby atrehin'ireo mpikirakira rindrambaiko amin'ny fitantanana lehibe, ny marimaritra iraisana, ny fanafoanana ary ny fizarana lakilem-bahoaka sy ny artifact hash. Midika izany fa ny mpampiasa dia tsy maintsy mamantatra izay lakile hitokisana sy hianatra ny dingana takiana hanamarinana ny sonia.
“Sigstore dia mikendry ny hamerina ho voamarina ny kinova rehetra momba ny loharano misokatra ary hanamorana ny fanamarinana ataon'ireo mpampiasa. Manantena izahay fa ho vitantsika ho mora toy ny mivoaka ny vim, ”hoy i Dan Lorenc, injenieran'ny rindrambaiko ao amin'ny ekipa mpiaro ny lozisialy open source Google.
Ny olana iray hafa dia ny fomba fizarana hashes sy lakile ampahibemaso: matetika dia mitahiry amin'ny tranokala mety misy fanapahana na ao anaty rakitra README miorina amina toerana fitahirizam-bahoaka.
SigStore dia mikasa ny hamahana ireo olana ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana lakile fohy mandritra ny fotoana fohy miaraka amina fotom-pitokisana nalaina avy amin'ny fisoratana anarana mangarahara misokatra sy azo hamarinina. Ny serivisy vaovao dia hanampy ny mpamorona sy ny mpampiasa hahatakatra sy hanamafy ny fihaviana sy ny maha-marina ny lozisialy, miaraka amina overhead kely.
“Tena faly amin'ny rafitra iray toa ny sigstore aho. Ny ecosystem software dia mila rafitra maika toy izany mba hitaterana ny toetoetran'ny rojom-panomezana. Mihevitra aho fa miaraka amin'ny sigstore, izay mamaly ny fanontaniana rehetra momba ny loharanom-pahalalana sy ny fananana, azontsika atao ny manomboka mametraka fanontaniana momba ny toeran'ireo rindrambaiko, ny mpanjifa, ny fanarahan-dalàna (ara-dalàna na amin'ny fomba hafa), hamantatra ireo tambajotran-jiolahy sy hiantohana ireo fotodrafitrasa fanaovan-tsiansa manakiana. ”, Hoy i Santiago Torres-Arias
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Sigstore, serivisy maimaimpoana hanamarinana ny niandohana sy ny maha-marina ny rindrambaiko